8 Dabeecadood Oo Keeni Karo Dib U Dhac Nolosha | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Miski Cabdinuur Salal — July 20, 2019
Adduunka aan ku noolnahay dad baa ku fekeray in ay tagaan daruuraha oo safara ku tagay xidigaha, qaarbaa safarkii hawada lagu mari lahaa sahmiyoo soo saaray dayuurad, qaarbaa sahmiyo baddaa weeyn sida loo gooshi lahaa hindsoo soo saaray markab.
Ma is weydisay adigu maxay dadkaasi kaaga duwan yihiin? Maxaase kugu keeni karo dib u dhaca noloshaada?
Qaar baa u istaagay iftiiminta adduunkaan oo mugdi ahaa, soona saaray nalal. Ma is weydisay adigu maxay dadkaasi kaaga duwan yihiin? Maxaase kugu keeni karo dib u dhaca noloshaada?
Waxaa Jiro 8 Dabeecadood Oo Keeno Dib U Dhaca Nolosha:
1. Cabsida Allah oo kugu yaraato: Xariga rabigaa idin ka dheexeyo haddii uu liito,noloshaada waxaa ku imaanayo dib u dhac.
Hammi la’aan: Kawaran haddii aad iska nooshahay oo kali ah, ma dib u dhac ka weyn oo kugu dhici lahaa ayaa jiro, bal kawaran qof socdo oo aanan garaneeynin halka uu socodo??.
3. Waqtiga oo aan laga faa’ideeysan: Waqtiga waa hantida dhabta ah ee aan heeysanno, waana waxa dadka kala sareeysiiyo kana dhiga mid guuleeystay noloshiisa iyo mid guul darreeystay.
4. Aqris yari: Aqriska waxa uu kobciyaa maskaxda, maskaxda kobacdayna waxa ay u diyaar garowdaa sida ay u hormarin lahayd nafteeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda intaba.
5. Hurdo badan: Haddii aad iska seexato maalin waliba, ama waqti badan waxa ay kuu keeni kartaa dib u dhac.
6. Cabsida dadka kale: Kawaran haddii aad rabto hormar iyo in aad isbaddal ku sameeyso noloshaada laakiin aad ka-welwalayso mar walibo dadka maxay isdhihi karaan.cabsidaas ayaad u noqeeneysaa maxbuus , waxa ayna keenysaa dib u dhaca noloshaada.
7. Dulqaad yari: Hormar walibo waxa uu ubbaahanyahay dulqaad, kawaran haddii uu dulqaadku kugu yaryahay, oo aad dooneeyso wax walbo in ay dhaqso u kobcaan!. hormar walibo waxaa soo saarey oo fiigta sare gaarsiyeey waa dulqaadkii dadkii howsha waday.
8. Joogteeyn la’aan: Kawaran haddii aad ganacsi furato, oo aad ka maqantahay ayna iska xirantahay meeshaada, kawaran haddii ey kaa waayaan wax walbo oo ay kaaga baahnaayeen macaamiishaada, kawran haddii aadan joogteyn ganacsigaaga, ama waxbarashada wax walbo waxa ay u baahan yihiin joogteeeyn si looga mira dhaliyo.
Tags: 8 Dabeecadood Oo Keeni Karo Dib U Dhac Noloshaada.
Next post Go’aan Qaadasho Wanaagsan
Previous post Faradhaqa ama falaxalka.